Sidee looga helaa ogeysiisyada Channelka aad ugu jeceshahay ▷ ➡️ Followers ▷ ➡️
Sida looga helo ogeysiisyada kanaalka aad ugu jeceshahay
Waxaa laga yaabaa 6, 2021 0 comments 326
Haddii aad raadineyso madal wanaagsan oo aad ku daawato fiidiyowyada internetka markaa waxaad tixgelin kartaa xulashada Youtube. Waa mid ka mid ah kuwa ugu dhammaystiran uguna shaqeynaya ee aad heli karto maanta. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu xiisaha badan ayaa ah in isla barnaamijku uu kugu wargalinayo marka qof uu soo galiyo fiidiyow cusub.
Haddii aad rabto inaad hesho ogeysiis markii qof uu ku daabaco fiidiyow dusha sare, waa inaad subscribe dheh kanaalkiisa marka hore. Maqaalka soo socda waxaan ku tusaynaa sida ugu fudud uguna fudud ee aad uga heli karto ogeysiisyada kanaalka aad ugu jeceshahay YouTube-ka.
Is qor si aad u hesho ogeysiisyo
Ma dooneysaa YouTube inay ku soo ogeysiiso marka kanaal ay fiidiyoow cusub ku soo rogto barxadda? Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad iska qorto kanaalkaas. Nidaamkani waa mid fudud, oo haddii aadan weli garanayn sida loo sameeyo, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad raacdo talooyinka soo socda talaabo talaabo ah:
Raadi kanaalka waxaad rabtaa inaad iska qorto
Guji "iga qor"waana diyaar
Taasi waa sida ugu dhakhsaha badan uguna fudud ee aad ugu qori karto tirada kanaallada aad rabto gudaha barnaamijka YouTube. Waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad ka sameyso arjiga moobiilka ama haddii aad doorbideyso kombiyuutarka. Waa kuwan tallaabooyinka si aad ugu qorto kanaal nooca desktop-ka:
Gaaritaan bogga rasmiga ah ee Youtube
Ciyaar video kanaalka aad rabto inaad iska qorto
Fiidiyowga hoostiisa waxaad kaheleysaa astaan ​​casaan ah oo ereyga “iga qor”. Halkaas guji waadna dhamaysay.
Hesho ogeysiisyada fiidiyowyo cusub Youtube
Dejinta akoonkeena YouTube si aan u helno ogeysiisyada fiidiyowyada cusub waa wax iska fudud. Waxaan kaliya u baahnaan doonnaa inaan aadno kanaalka aan dooneyno inaan ka helno ogeysiisyada oo aan hubinno inaan ka mid nahay. Waxay noqon doontaa wax aan macquul aheyn in la kiciyo ogeysiisyada iyada oo aan horey loogu qorin kanaalka.
Ka hawlgeli ogeysiisyada kombiyuutarka
Isticmaalayaasha waxay leeyihiin ikhtiyaariga ah dhaqaajiso ogeysiisyada nooca desktop-ka ee Youtube. Tan awgeed, waxaa muhiim ah in la furo biraawsarka isla markaana la helo bogga rasmiga ah ee barnaamijkan socodka fiidiyaha ah. Kadib waa inaad raacdaa talaabooyinkan fudud:
Madaxa kanaalka meesha aad rabto inaad ka hesho ogeysiisyada
Astaan ​​leh ereyga "ku qornaa”. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad horay uga mid noqotey kanaalkaas oo aan ku sii wadi karno hawsha.
Astaamaha gambaleelka ayaa u muuqda agtarka "rukunka" astaanta. Guji oo xulo xulashada "Dhammaan"
Hada markasta oo channelku soo duubo fiidiyow cusub waxaad heli doontaa ogeysiis si aad u aragto.
Ka hawlgeli ogeysiisyada abka
Ogeysiisyada kanaalka ma laga hawlgelin karaa arjiga? Jawaabtu waa haa. Halkan waxaan kuu sheegeynaa tillaabooyinka la raacayo:
Furan barnaamijka Youtube
Gaaritaan kanaalka aad rabto inaad ka hesho ogeysiisyada
Ku dhaji astaanta qaabka gambaleel
Xulo xulashada “Dhammaan"waana diyaar
1 Is qor si aad u hesho ogeysiisyo
2 Hesho ogeysiisyada fiidiyowyo cusub Youtube
3 Ka hawlgeli ogeysiisyada kombiyuutarka
4 Ka hawlgeli ogeysiisyada abka
Waxaan rabaa inaan ku daboolo Twitch. Maxaad igula talinaysaa